အထောက်အထား — Steemkr
အထောက်အထား, သူ့ဟာသူအတွက်သတ်မှတ်-စေတစ်ဦးတည်းကိုယျ့ကိုယျကိုတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖြစ်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာဝိသေသလက္ခဏာကျွန်တော်နှင့်အခြားသူများငါတို့ဆိုသညျကားအဘယျသို့ဖွဈသညျကိုပုံရသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဝိသေသလက္ခဏာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားသူများကိုယျ့ကိုယျကိုပြောပြမယ့်ပုံပြင်ကိုဖွဈသညျနေသောကြောင့်, ခဏရဲ့အသိပေးစာမှာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အထောက်အထားတစ်ခုအစိုင်အခဲ, ထွင်းထု-သို့ကျောက်ကြေညာချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုအချိန်တွင်မှယခုအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောက်အထားတွေကိုပုံဖော်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကို နေကြသည်။
ကျွန်မအခိုင်အမာဟာလောကအမြင်အတွင်းငါ၏အဝိသေသလက္ခဏာသတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်သေးပါ, ငါအဓိကအားဖန်တီးမှုနှင့်ဝိညာဉ်ရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါဒေသန္တရ ကဗျာရေးရန်နှင့်မနာသီချင်းဆိုမည်။ ကျွန်မမှန်မှန်ဂျာနယ်များငါ့ကဗျာတင်ပြရန်နှင့် အဖြစ်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လုပ်ဆောင်။ ငါဖျော်ဖြေပွဲအတွက်တခါတရံတွင်သီဆိုပျော်မွေ့, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ကိုယ့်လူတန်းစားပေါင်းစုံအပေါ်အိမ်နှင့်နေစဉ်အတွင်းမှာငါ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားဘို့မနာသီချင်းဆိုမည်။ ဝိညာဉျ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါတစ်ခုချင်းစီကိုနံနက်ဆငျခွငျနှင့်ညဉ့်, နေ့စဉ်အတွင်းဝိညာဉ်ရေးရာဂီတကိုနားထောင်ပါ။ ငါသည်လည်းဝိညာဉ်ရေးရာဗုဒ္ဓဘာသာ, ခရစ်ယာန်ဘာသာ, အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့တခြားဘာသာတရားကနေအတွေးအခေါ်များနှင့်အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားသုံးသပ်ပျော်မွေ့။ ငါတစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးတရားအားထုတ်ရန်ပြည်နယ်ထဲမှာဆက်ရှိနေဖို့ကြိုးစားပါ။
ငါကပိုသာမန် နဲ့ကျွန်မဆီယက်တဲလ်, ဝါရှင်တန်ရှိမွေးဖွားခဲ့ပြီး, လက်ရှိရှိနထေိုငျသူ 33 နှစ်အရွယ်ကော့ကေးဆပ်အထီး, အမေရိကန်, ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောနိုင်ပါသည်။ ငါဇနီး, သားသမီးမနှင့် ရှိသည်။ ငါအကြောင်းအရာညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အယ်ဒီတာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးအစားအစာမက္ကဆီကန်အစားအစာသို့မဟုတ်အီတလီအစားအစာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့လူကန်လန်နှင့် နှစ်ဦးစလုံးဖွဈ၏။ ငါအိုင်ကျူစမ်းသပ် ယူ. တစ်ဦးအနီး-ပါရမီရမှတ်တယ်။ ငါငါးခွဲစိတ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ငါသည်ငါ့အရေးအသားဘို့ဆုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မရံဖန်ရံခါစစ်တုရင်ကစားရန်ကြိုက်နှစ်သက်နှင့်အထက်တန်းကျောင်းမှာဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုအရူးဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နှင့်အတှငျးတစ်ဦးရောနှောဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာချွတ်စာရင်းပြုစုဖို့သိပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်မစာဖတ်သူတွေကတဆင့်လမ်း၌ရှောက်သွားကြဖို့အတှကျပါလိမ့်မယ်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်မသိရပါဘူး။
ကြှနျတျော့ရဲ့အထောက်အထားဆန်းစစ်ပါ, ငါဟုတ်တယ်, ငါမည်သူမဆိုတစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစမ်းသပ်မှုအတွက်ဖြည့်စွက်နိုင်တဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ သို့သော်ဝိသေသလက္ခဏာ၏ဤအလွှာအောက်မှာငါတစ်ဦးထက်ပိုတစ်လောကလုံးဝိသေသလက္ခဏာလည်းရှိ၏ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာဝနာမှတဆင့်ကျွန်မအချိန်လေးနှင့် အချိန်ရသောအခါအားလုံးငါ၏အကြံအစည်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံတွေ့ကြုံကြနှင့်စိတ်ခံစားမှုဒါအဝေးမှာငါသူတို့ထံမှ လုပ်လိုက်သောခံစားရကြောင်းတိုက်ရိုက်ရိပ်မိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ကြှနျတျော့ရဲ့အထောက်အထားရိုးရှင်းစွာသတိဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အံ့အားသင့်ဖြစ်ခြင်းအပြင်, ငါသညျဤပြည်နယ်၏အလုံးစုံတို့အဘို့မရရှိနိုင်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့ကို-ကြောင်းစင်ကြယ်သောဝိညာဏ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်လောကလုံးဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
esteem identity verify important life
Congratulations @ngawine! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :